Fomban-drazana Halloween amerikana - trano manenjika
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Fomban-drazana Halloween amerikana - trano manenjika
Ny niandohan'ireo zava-mahaliana manenjika ara-barotra dia natomboka tany Etazonia ary nanjary toy ny fomba amam-panao amerikana. America Haunts, ilay fikambanan'ny indostrian'ny haita ara-barotra, dia nanome anarana ireo trano manenjika indrindra amin'ny alàlan'ny lisitra ao anaty lisitry ny siny misy ireo zava-manintona “tsy maintsy iainana” manerana an'i Amerika.
Tsy misy taolana momba an'io - ny manintona ny saina dia tokony hiditra amin'ny haitao avo lenta, ary ho faran'izay mafy amin'ny heviny hanao izay mbola tsy natao, mba hamoronana tahotra adrenalinina ho fahafinaretana.
FAMPANDROSOANA ANTANANARINANA FAHA-2018 TSARA ANATIN'NY FAHASALAMAM-BONIN'NY FAHAROA 5 XNUMX - Mitaky fahaiza-manao ratsy mba hialana voly amin'ny alàlan'ny tantara masiaka, fandaniam-bola efa nandroso, toa fandrahonana azo tsapain-tanana, ary animatronics mandray andraikitra.
1. Bennett's Curse Baltimore, Maryland: haitao malaza iray noho ny traikefa misy lohahevitra sy lalina izay miavaka noho izy ireo mampatahotra. Monster Fest dia mampiseho fampisehoana fampitahorana tsy manam-paharoa. Mandehana avy amin'ny horohoro kilasika ao amin'ny Legends of Halloween mankany amin'ny ambaratongam-piainan'i Underworld, ny tontolo miroboka ao amin'ny Inferno 3D, ary ny Ravenbrook Asylum.
2. Spooky World Litchfield, New Hampshire: Mahatsapa ireo mpitsidika fa misy zava-misy mampatahotra miisa dimy amin'ny toerana mampihorohoro any Nightmare New England sy ilay haunted Hayride, iray kilometatra. A Monster Midway, zombie paintball, go-karts, mpamaky karatra tarot, ary lavaka afo no mampatahotra ny tahotra.
3. Erebus Pontiac, Michigan: Ity trano mimanda misy rihana efatra fanta-daza eran'izao tontolo izao ity dia mitaona ny kiakiaka mandatsa-dra mandritra ny antsasa-kilaometatra an-trano. Ny vokany manokana mahery vaika sy ny famelabelarana misy endrika azy dia manasongadina zavatra izay hisambotra, hanaikitra, hipetraka eo ambonin'ireo iharany, ary handevina azy ireo velona mihitsy aza!
4. Haunted Hayride sy Bates Motel Haunted House Philadelphia, Pennsylvania: fampisehoana fampihorohoroana sy fahatairana tsy mampino miandry ireo miditra. Ny fahatsapana fahenina mahatsiravina amin'ny fijerena dia misy hatrany miaraka amin'ireo fitaovana animatronic mitsikilo ary dragona vato lava 20 metatra.
5. Trano haunted faha-13 ao amin'ny Denver, Colorado: ny angano sy ny nofy ratsy dia ho velona amin'ny fitsangatsanganana mahatsiravina amin'ny nofy ratsy 13, rihana XNUMX mahitsy. Ny stunt cast dia mampiasa teknolojia hampatahotra azy.
FITSIPIKA VOALOHANY TOP 2018 5 - Ireo fisarihana ireo dia mandeha lavitra mba hampitomboana ny fampitahorana, handroboka kokoa ary ho sahy kokoa.
1. Hotely haunted San Diego, California: nandefa mpitsangatsangana an-tongotra nidina an-dalambe maizina sy feno zombie ny Hotel Haunted, izay, tsy toy ny maty maty any Hollywood, dia manenjika fatratra ireo tsy maty. Ny nofy ratsy apokaliptika dia mihaino ny biby an-dranomasina sy ny biby avy any rehetra any.
2. Ireo mpitaingin-tsoavaly tsy misy lohany Hayrides sy ny Haunted Houses Ulster Park, New York: Manodidina ny 65 hektara ao amin'ny lohasahan'i Hudson manan-tantara, ity fisarihana mega haunted ity dia toa safidy tsy manam-petra miaraka amin'ireo mpilalao 375 sy ireo ekipa mpiasan'ny ekipa hiasa ny ahitra, ny katsaka ary ny manintona folo manenjika.
3. House Haunted House ao amin'ny 13th Floor, Arizona: Ity fampisehoana an-tsehatra mahery vaika sy sary an-tsehatra ity dia mitaky herim-po amin'ny dia mahasosotra mampientam-po amin'ny visceral sy horohoro ara-tsaina. Ao anaty korontana, mihidy ny rindrina, mihozongozona sy mihozongozona ny gorodona - ary mirongatra ny zombies.
4. Nofy ratsy tao amin'ny Haunted House Saltth City City, Utah: Tsy misy vato tsy voahodina hampitahotra an'ity manintona ity. Miaraka amin'ny efitrano 13 samihafa, ao anatin'izany ny Ossuary sy ny Bone Lord, ny toeram-pitrandrahana Goblin ary ny fisintomana X-hiantsoana tahotra dia azo antoka.
5. Dent Schoolhouse Haunted House Cincinnati, Ohio: Mandehandeha mamaky ilay trano sekoly taloha mampihoron-koditra ireo vahiny ary, miaraka amina teknolojia fandrindrana ny fandrindrana ny lozisialy, ity haunt ity dia mety hahatonga sary sy sarivongana hita velona velona.
FAMPANDROSOANA FAHA-2018 TANY 4 TOP - FOMBA fiasa mahery vaika dia miezaka ny mamorona fika be loatra amin'ny alàlan'ny fifangaroana miavaka amin'ireo mpitsidika fialamboly mampatahotra izay tsy ho hita any an-kafa.
1. Spookywoods High Point, North Carolina: maka ny toerana ambony indrindra noho ny fampiasàny endrika maro sosona, fampitahorana, fisehoana ifanakalozan-kevitra - ao anatin'izany ny laser laser zombie, tsipika zip, ary ny maze voapaika hazo kesika 60 'lava miaraka amin'ny sampahon'ny trano manenjika olona iray manaraka ny lalan-dratsy.
2. Thrillvania Dallas, Texas: Ity haunt ity dia manana horohoro 50 hektara, mampiasa karazana tahotra isan-karazany hanaronana ny gauntlet. Ekena eo amin'ny sehatra iraisampirenena noho ireo setany manazava azy, ireo mpilalao sarimihetsika mahatalanjona ary ireo vokany manokana miavaka.
3. House of Torment Austin, Texas: Tamin'ny taona 2018 dia nitombo avo telo heny tamin'io zava-nahatsiravina io izy ireo niaraka tamina zava-manintona vaovao telo misy lohahevitra vaovao ao amin'ny toeram-pivarotany mampihoron-koditra - miaraka amina fialamboly miroboka tanteraka mba hampampangatsiaka ireo mpitsidika hatramin'ny taolany. Ny haunt dia misy koa seho laser, tarehimarika manidina, ary maro hafa.
4. Beast Kansas City, Missouri: Ny Beast dia avy amin'ny mpamokatra ny trano manenjika voalohany, efa ho zato taona lasa izay. Nanjary tsy rototra ireo mpitsidika tamin'ny alàlan'ny tantara 4 nitady fomba hivoahana sy handosirana ny fanafihan'ny biby.
FAMPANDROSOANA FAHAROA 2018 TOP 4 TSY MISY INDRINDRA - Mpimasy ao anatin'ny zava-baovao indrindra ny fampiroboroboana ny saina amin'ny aloky ny majika sy ny haitao avo lenta mba hahatonga ny zava-drehetra ho tena zava-misy.
1. NETHERWORLD Stone Mountain, Georgia: nanao ny asan'ny mpisava lalana amin'ny alàlan'ny hatsaran-tarehy avo lenta sy mony silikona ho an'ny kalitao avo lenta, izay miteraka tahotra mihetsiketsika izay mandentika ny mpanjifa. Ny fihetsika ataon'ny mpilalao tsy manam-paharoa sy mampatahotra ampiarahina amin'ny andalana tantara mahery dia azo antoka fa handresy ireo mpitsikera mpanenjika.
2. Cutting Edge Fort Worth, Texas: Ity trano manenjika olona lehibe indrindra manerantany ity dia nahazo ny anarany tamin'ny fampiasany ny orinasa fanangonana hena nilaozana ary koa ny fanavaozana ny fanapahana. Matetika ny olona mihazakazaka mihorohoro noho ny tahotra sao hiafara amin'ny fatin'omby rehefa manamafy ny traikefa ny tarika mivantana.
3. Rihana faha-13 San Antonio, Texas: Nahazo fientanentanana ny mpitsidika ary nampihombo ny horohoro ara-tsaina noho ny rafi-peo maneno sy manara-penitra ao amin'ny rihana faha-13. Ny animatronicsin'izy ireo dia manana teknolojia natsangana izay afaka mahita, mandre ary mihetsika amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso mamaly manodidina ny farihy laser-ny.
4. vavahady faha-13 Baton Rouge, Louisiana: Fantatra amin'ny maha-zava-misy azy sy ny antsipiriany, ity haunt ity dia manelingelina ny elanelan'ny nofy ratsy sy ny zava-misy. Efatra arivo metatra toradroa amin'ity orinasa ity miaraka amin'ny CarnEvil, làlana manenjika feno sisin-tany miolikolika, endri-tsoratra mampihoron-koditra, sns.